July 10, 2020 - Alinnpya
July 10, 2020 AlinnPya Comments Off on မကွေးတိုင်း အစိုးရရုံးဝန်းအတွင်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
မကွေးတိုင်း အစိုးရရုံးဝန်းအတွင်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် လူသတ်မှုဖြစ်ပွား မကွေးတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးဝန်းထဲက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အမျိုးသားတဦး ဆေးရုံအရောက်မှာ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတဦးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ “အစိုးရရုံးဝန်းထဲက လက်ဖက်ရည်ဖျော်သူနဲ့ မော်တော်ယာဉ်မောင်း တို့နှစ်ဦး အချင်းချင်း စနောက်ရာကနေ မကျေနပ်လို့ ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အတွက် ယာဉ်မောင်းလုပ်ကိုင်သူဟာ ဆေးရုံအရောက်မှာ သေဆုံးခဲ့တာ။” မကွေးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးမြင့်လွင်ကတ “လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ […]
July 10, 2020 AlinnPya Comments Off on ရေးမြို့၌ မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးစဉ် တပ်ကြပ်ကြီး ၁ ဦး သေနတ်ထိမှန်သေဆုံး
ရေးမြို့၌ မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးစဉ် တပ်ကြပ်ကြီး ၁ ဦး သေနတ်ထိမှန်သေဆုံး မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ စုံနံ့သာကျေးရွာ ရာဘာခြံတဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချနေကြောင်းသတင်းရ သွားရောက်ဖမ်းဆီးစဉ် တပ်ကြပ်ကြီး ၁ ဦး သေနတ်ထိမှန် သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ ရဲအရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။ မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု ၃၉ မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ နယ်မြေခံတပ်သားတချို့ပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီအချိန်က သွားရောက်ဖမ်းဆီးရာမှာ ရာဘာခြံတဲပေါ်မှာ အဒီ၊ […]
ကျွန်းစုမြို့နယ် မရွှေဦးကျေးရွာတွင် လင်မယား စကားများရာက မီးရှို့မှုဖြစ်ပွား
July 10, 2020 AlinnPya Comments Off on ကျွန်းစုမြို့နယ် မရွှေဦးကျေးရွာတွင် လင်မယား စကားများရာက မီးရှို့မှုဖြစ်ပွား
ကျွန်းစုမြို့နယ် မရွှေဦးကျေးရွာတွင် လင်မယား စကားများရာက မီးရှို့မှုဖြစ်ပွား တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ် ကမ်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရွှေဦးကျေးရွာ၊ အထက်ပိကြပ်ရပ်တွင်၉. ၇. ၂၀၂၀ နေ့ရက် နံနက်(၇)နာရီချိန်က ကိုအောင်နိုင်သူ (ဘ) ဦးမောင်နိုင် သည်လင်မယားစကားများ စိတ်ဆိုးရာမှ မိမိနေအိမ်အား ဓါတ်ဆီလောင်း၍ မီးရှို့ခဲ့ရာနံနက်( ၈)နာရီအချိန်တွင်မီးငြိမ်းခဲ့သည်ဟု သိရှိရပြီး၊ မီးလောင်မှုကြောင့်လူထိခိုက်မှု့မရှိဟု ကြားသိရပြီး ဓနိမိုး ၊ထရံကာ ပျဉ်ခင်း လူနေအိမ်တလုံး၊ တန်ဖိုးငွေကျပ် (၁၀)သိန်းခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် […]
July 10, 2020 AlinnPya Comments Off on မိခင်ဖြစ်သူမှ ရည်းစားဆီရှစ်ရက်ကြာသွားနေစဉ် သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ် အစာရေစာပြတ်ပြီးသေဆုံး
မိခင်ဖြစ်သူမှ ရည်းစားဆီရှစ်ရက်ကြာသွားနေစဉ် သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ် အစာရေစာပြတ်ပြီးသေဆုံး ဇူလိုင်(၉)၊ ကာဂိုရှီးမား။ ရည်းစားဖြစ်သူဆီ ရှစ်ရက်ကြာသွားရောက်နေထိုင်စဉ်အတွင်း အိမ်တွင်ကျန်ခဲ့သော သုံးနှစ်အရွယ်ကလေး အစာရေစာပြတ်ပြီးသေဆုံးခဲ့သောဖြစ်ရပ် တစ်ခု ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဆာကီကာကီဟာရှီ (Saki Kakehashi) မှာ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ကွဲအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမတွင် အသက် ၃ နှစ်အရွယ် နိုအာ (Noa) ဟူသော သမီးမိန်းကလေးတစ်ဦးရှိပြီး လွန်ခဲ့သော ရှစ်ရက်က ကာဂိုရှီးမားခရိုင်တွင်နေထိုင်သော ရည်းစားဖြစ်သူထံသွားရောက်လည်ပတ်ရာမှ သမီးဖြစ်သူ […]